KACDONKA BARBAARTA SITTI GUUSHII DHALATAY INAY GAAGIXIN – Xeernews24
KACDONKA BARBAARTA SITTI GUUSHII DHALATAY INAY GAAGIXIN
19. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Inkastoo Networkigu uu ka jaranyahay gobolka Siiti oo ay adagtahay waxa ka socda in lala socdo iyagana oo aan wadaagi karayn talooyin hadana xaruuntii taliska ee Jigjiga waxaa ka socda dhacdoooyin si xoogan isku daba dhacaya oo aad moodo in laga hor dhacayo arimo .
Sidoo kale caasimada dalka Adis Ababa waxaa isugu tagay kooxo iyo afraad ka kala yimid daafaha aduunka iyo dalka gudihiisa ba .
Cid kastana waxay u ordaysaa inay ka qayb gasho sixniga keega ah ee ku sugaha ah ee dhawaan la soori doono .
Waxaa la hadal hayaa in la samaysan doono axsaab siyaasi ah
Oo xilka madaxtinimo iyo tan sharci dajintaba loo tartami doono Laakiin taa waxaa ka horayn doona marxalad ku meel gaadh ah oo wali la cayimin muda ahaan intay noqon doonto waa marxalada hada uu loolanku ka taaganyahay waaana midaan ugu yeedhay sixni keeg ah oo ku suga ah laguna sugayo sixnigii wayn .
HADDABA SITTI SIXNIGA KEEGA AH EE KUSUGAHA AH INTA SOORMAYSA KAMID MA TAHAY ?
Suaashaa jawaabteedu akhristyaasha oo dhan way u furantahay aniguse aragtidayda gaarka ah unbaan ka dhiiban .
Halgankii barbaarta Sitti uu guulaystay taliskii ay ku keceena uu dhacay dhibaatada ka soo gaadhayna ma aha mid la suuraysan karo tacaddiyo nuuc walba waa loo gaystay reer Sitti .
Waxaase la rabaa inay reer Sitti iyo barbaartuba ogaadaan arintu inay waji kale gashay waji aan odhan karo wuxuu lamid yahay “ Xilliga goosashada beerta “ cidii beerta soo abaqaashay dhib badan u soo martay hadh iyo habeena ka dhabaysay xayawaanka iyo haada waxaa faral ah inay goostaan dhididkooga iyo dheeftii ka dhalatay wixii dhib soo maray .
Jawaabta anoo sii gudagalaya kama jiro gobolka Sitti intaan ogahay Xisbi siyaasadeed loomana ogolayn inay samaystaan waxaase jira afraad aan odhan karo way matali karaan gobolka wayna soo goosan karaan keega dhankooga .
Waxase aan saluugay xubnahaaa aan sheegayo kama muuqdaan caasimada dalka ee lagu dhanyahay iyo tan deegaanka intaba haday joogaana ma muuqdaan .
Waxa kaloo jira xubno ka tirsan gobolka Sitti oo ku biiray kooxo kale aaminsana mabaadi’dooda iimana kala cadda wali inay kooxahaa ugu biireen inay cadkii Sitti soo ridaan iyo inay dana gaar ah ka rabaan .
GUUBAABO IYO TALO :
1- Marxaladan la joogo gobolka Sitti wuxuu u baahanyahay xubno aqoonyahana ah oo ay ka go’antahay inay keega soo gooyaan qayb libaax oo u qalanta guushii uu gobolka Sitti soo hooyay ee lagu wada diirsaday .
2- Barbaartu waa inay qabsadaan oy iskugu yimaadaan shirwayne u gaar ah iyaga oo kali ah , ay ka soo qayb galaana gabi ahaanba barbaarta gobolku min ayshaca , ma’yso , cundhufo , xaarisa ……..
3 – Waa inay ku lafa guraan shirka geedisocodkii halgankii dheeraa waana inay isku raacaan inay dajiyaan qoraan ujeedooyin cad cad oo iskugu jira kuwa dhaw kuwa fog oo loo guntadu sidii loo xaqiijin lahaa .
4- Barbaartu waa inay samaystaan Urur ah Dallad sharciyaysan oo waligeedba jirta ahaatana mid wadata hawsheeda gobolkana u soo jeeda oo ka dhiidhida dhib kastoo loo gaysanayo una raadisa xuquuqda shacabwaynaha .
5 – Magaca dallada waxaan qabaa in loo daayo magacan hada jira ee ah “ Barbaarta Sitti “
6 -Waxa kaloon la wadaagayaa inay samaystaan xeer hoosaaad kala haga oo loo wada hogaansamo.
7- Waa inay iska dhex doortaan masuulo sida madaxa ururka , xoghayaha , afhayeenka … iwlm ay isticmaalaan codbixintii saxaradaha , kana dheeraadaan si jiidjiidasho iyo khilaaf .
8- Waa inay qoraan baahida ka jirta gobolka Sitti oy u horeeyaan adeegyada bulsho sida ( Xaruuma caafimaad , gawaadhida gurmadka dagdaga ah , tacliinta oo la tayeeye qalab ahaan iyo bare ahaanba waana inay ku darsadaan jaamacado in loo dhiso gobolka , biyaha , korontada , war is gaadhsiinta , …. ) sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha oy u horeeyaan wadooyin isku xidha gabi ahaan ba gobolka .
9- Waa inay si cad u qeexaan nidaamka maamul ee ay rabaaan wuxu yahay haka hadlaan ciidamada amaanka , iyo shaqaalaha kala duwan ee ka hawl gali doona gobolka , iyadoon ognahay inuu kacdoonka barbaartu ka dhashay dhibaatooyinkii ay keentay dibu curashadu .
10- Waa inay si kulul u dalbadaan in la soo celiyo Sitti dhulkeenii barwaaqada ahaa ee ka tirsanaa Gallin ciisaadka dhuuyar ( Cundhufo , Cadayti , Garba Ciise ) Ee sida xaqdarrada ah loogu daray gobolka canfarta .
11- Gunaanadkii : waa inay waxaasoo dhan buug ku dhigaan oy qoraan waana inay shirka ka soo saaraan war murtiyeed cad oy ku baahiyaan war si gaadhsinta iyo baraha bulshada .
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Kacdoonka-Barbaarta-Sitti.jpg 336 546 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-19 12:09:282018-08-19 12:09:28KACDONKA BARBAARTA SITTI GUUSHII DHALATAY INAY GAAGIXIN
Acmaasha Xajka oo ka bilaabatay Sacuudiga & tirada Soomaalida xajiday oo... FAAHFAAHIN: Shirkii Qiimeynta Golaha Dhaxe XDSHSI & Xubno Laga Saaray Gudiga...